समफलता का सुत्र हरु -
यस्ता छन असल श्रीमानमा हुनुपर्ने १० गुणहरु
स्वास्थ्य जीवनको तीन कडीः आहार, विहार र विचार
सावधान ! विभिन्न राेगकाे जाेखिम हुन्छ ३० वर्ष कटेका पुरूषहरूमा
नङ फुल्दा नयाँ लुगा आउने हाेइन , राेग आउने गर्दछ – जान्नुहाेस्
लक्ष्यप्राप्तिका लागि केहि सुत्र
एउटा यस्ताे अस्पताल : जहाँ बिरामी भेट्न जाँदा फलफुल हाेईन कार्ड बाेक्नुपर्छ
बच्चाले व्यायाम नगर्दा के हुन्छ ?
म:म खानु शरीरका लागि कति खतरनाक ?
शिशुलाई बजारको प्याकेटबन्द खानेकुरा कति हानिकारक ?
सिस्नो र यसका उपयोगी फाइदाहरु
अनौठो नमान्नुहोस ताली बजाउदा निको हुन्छ यी रोग
गर्मी रापमा कसरी शरीरलाई सीतल बनाउने ?
महापुरुषका केही मननयोग्य भनाईहरु
आदर्श भनाइ हरु
By hari August 9, 2019 No Comments
हरेक पत्नी आफ्ना पतिबाट अपार मायाँं, हार्दिकता, विश्वास र सुख चाहन्छन् । यी यस्ता विराट् विषय हुन्, जो सजिलै पाइँंदैन, आउँंदैन । त्यसका लागि दुवैको विश्वास र मान्यतामा निकटता जरुरी हुन्छ । विभिन्न अध्ययनकर्ता र चिन्तकहरुले पत्नीले पतिबाट चाहने विषयलाई विभिन्न दश बुँंदमा यसरी उल्लेख गर्ने गरेका छन् । १. विशेष पलको स्मरण: सुख, खुसी,आनन्द र […]
By hari August 8, 2019 No Comments
हामी निरोगी जीवन बाँच्न चाहन्छौं । सधै तन्दुरुस्त र जवान रहन चाहन्छौं । कुनैपनि रोग, कष्ट आदिबाट टाढा रहन चाहन्छौं । अस्पताल धाउनुपर्ने, औषधी खानुपर्ने, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने यावत् प्रक्रियाबाट मुक्त रहन चाहन्छौं । हामी चाहन्छौं, जीवनभर अस्पताल जान नपरोस् । औषधी सेवन गर्न नपरोस् । प्राकृतिक रुपमै निरोगी र तन्दुरुस्त जीवन विताउन पाइयोस् […]
४० देखि ४५ को उमेर देखि मानव शरीरमा पहिलाको जस्तो शक्ति हुँदैन । उमेर बढेसँगै विभिन्न रोगका साथसाथै शरीरमा पनि परिवर्तन देखा पर्न थाल्छ । तर, आजकलको अनब्यवस्थित जीवनशैली, अस्वस्थ खानपानका कारण ३० वर्ष पार गरेसँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न खतराहरु बढ्ने गरेको पाइन्छ । उमेर बढ्दै गएसँगै दिमागको स्मरण शक्तिमा कमी आउनुलाई सामान्य मानिन्छ । डाक्टरहरुका […]
नङमा सेतो धर्सा बसेमा हामी त्यसलाई नङ फुलेको भन्छौँ । बच्चाबेलामा यसरी नङ फुल्दा नयाँ तथा राम्रो लुगा पाइन्छ भनेर निकै खुशी हुने गरिन्थ्यो । तर, नङ फुलेमा वा नङको रङ परिवर्तन भएमा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, आमची तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूमा यसलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएको समस्याको रुपमा लिइने गरिन्छ । नङ फुल्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो […]
मानिसको दैनिक जीवनसंग सबैभन्दा आवश्यक बस्तु बनेको छ मोवाइल । संसारका मात्रै होइन नेपालका पनि करीब करीब ८० प्रतिशत मानिसहरुमा मोवाइलको पहुच छ । यो संख्या आउने बर्षमा अझ बढ्नेमा दुईमत छैन । तर यसको अति प्रयोग वा अव्यवस्थित प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको अध्ययनहरुले देखाएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले मोवाइलबाट निस्कने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले स्वास्थ्यमा […]
लिथुआनियाकी ज्याभलिन थ्रोअर इन्गा स्टासियुलिओनिटीले आफ्नो २२ वर्षभन्दा लामो खेलाडी जीवनका दौरान ओलम्पिक तथा विश्व च्याम्पियनसिपसहित थुप्रै प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरिन् । दुई दशक लामो खेलाडी जीवनमा विश्वका उत्कृष्ट प्रशिक्षकको रोहवरमा रहेर अभ्यास गरेकी इन्गाले सन् २०१६ यता मोटिभेसनल साइकोलोजीका विषयमा प्रशिक्षण दिनका लागि ‘अन्बोट्रेनिङ’ नाम अनलाइन कम्पनी खोलेकी छिन् । जीवनमा चाहेको लक्ष्य कसरी हासिल […]
By hari August 5, 2019 No Comments
सफलताका सुत्रहरु/साउन २१, २०७६ सामान्यतया बिरामीलाई भेट्नकाे लागि फलफुल जुसहरु उपहार बाेकेर जाने हाम्राे संस्कार नै बनिसकेकाे छ । vहामीले बाेकेकाे फलफुल वा जुस बिरामीले प्रयाेग गर्छन कि गर्दैनन, मन पराउछन कि पराउन्नन वास्तै नगरी फलफुल बाेकेर जाने संस्कार ताेड्न रुपन्देहीमा रहेकाे गुराँस हस्पिटलले नयाँ प्रयाेग गरेकाे छ । हुन त यस्ताे प्रयाेग अन्यत्र पनि […]
By hari August 2, 2019 No Comments
हामी भन्छौं, तीस बर्ष पार गरेपछि अनिवार्य व्यायाम गर्नुपर्छ । खानपानमा सर्तक हुनुपर्छ । स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । बालबालिका वा किशोरकिशोरीको हकमा भने हामी व्यायामको कुरा गर्दैनौं । उनीहरु यसैपनि स्वस्थ्य हुन्छन् । खेल्छन्, उफ्रन्छन्, दौडन्छन् । शरीर लचिलो हुन्छ । रोग लागेकै हुँदैन । त्यसैले अतिरिक्त व्यायामको जरुरत हुँदैन । के बालबालिकालाई व्यायाम आवश्यक […]
By hari July 30, 2019 No Comments
सुन्दर देखिन खोज्नु हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ । किशोर-किशोरी, युवा-युवती, महिला-पुरुष, वृद्ध-वृद्धा सबैलाई आफ्नो सुन्दरताप्रति चासो भैरहन्छ । कोही आफ्नो हाइट कम भएकोमा दुःखी हुन्छन् भने कसैलाई आफ्नो अनुहारको रंग नै मन पर्दैन । कसैलाई आफ्नो हेयर स्टाइल परिवर्तन गर्न मन लागिरहेको हुन्छ भने कसैलाई आफ्नो शरीरमा पहिरन नसुहाएको गुनासो हुन्छ । व्यक्तित्वलाई आकर्षक बनाउने […]
नेपालीहरुले पैसा, स्वाद र सन्तुष्टिका हिसावले कुनै एक उत्कृष्ट खाजाको नाम लिन लगाए उनिहरुको मुखबाट म.म. आउने गरेको छ । बजारमा पाइने धेरै प्रकारका परिकारहरु मैदाबाट बनेको पाउँछौं । डाक्टरहरुका अनुसार त्यस्ता परिकारहरु खाँदा अनावश्यक तौल बढ्ने हुन्छ । साथै हड्डी पनि खिइन्छ । दैनिक मैदाबाट बनेको मम खानु शरीरका लागि खतरनाक हुन्छ । म:म […]